नाम मात्र होइन, कामले नै आफूलाई भगवान प्रमाणित गरिसकेका छन्, मुटु रोग विशेषज्ञ डा भगवान कोइरालाले । यिनै डाक्टरले गैरनाफामूलक बाल अस्पताल चलाउने जिम्मेवारी पाएका छन् ।
नाम मात्र होइन, कामले नै आफूलाई भगवान प्रमाणित गरिसकेका छन्, मुटु रोग विशेषज्ञ डा भगवान कोइरालाले । यिनै डाक्टरले गैरनाफामूलक बाल अस्पताल चलाउने जिम्मेवारी पाएका छन् । काठमाडौँ हेल्थ इन्स्टिच्युट नामक संस्थाका लागि सरकारले बूढानीलकण्ठमा ४१ रोपनी जग्गा दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
बाल अस्पतालको आवश्यकता किन ?
हाम्रो ४० प्रतिशत जनसंख्या १८ वर्षमुनिको छ । तर यति ठूलो जनसंख्याका लागि समर्पित स्वास्थ्य सेवा सीमित छ । हाम्रो स्वास्थ्य सेवा कमजोर छ । बालबालिकाको उपचार सेवा झन् कमजोर । त्यसैले यसको खाँचो देखियो ।
यो योजनामा लाग्ने प्रेरणा के हो ?
सन् १९९८ मा पढ्न अमेरिका गएँ । त्यसपछि एक वर्ष क्यानडामा बच्चाकै मुटुको विषयमा विशेष फेलोसिप पाएँ । बच्चाको मुटुको उपचारमा मेरो पुरानो दक्खल र रुचि हो । अहिले मैले के बोध गरेँ भने मुटुको मात्रै उपचार गरेर बच्चाको सेवा पूर्ण नहुने रहेछ । समग्र सेवा एकै छातामुनि चाहिने रहेछ ।
राज्यले पनि गर्न नसकेको काम तपाईंले कसरी सम्भव देख्नुभयो ?
सरकारी अस्पतालको दरमै उपचार दिइन्छ । केही प्राइभेट क्याबिनचाहिँ अलि सुविधासम्पन्न हुन्छन् । साधारण र क्याबिनको उपचारमा केही फरक पर्दैन । सामान्य सेवा लिने बिरामीको खल्तीबाट पैसा खर्च नहोस् भन्ने चाहन्छौँ ।
यो चाहना कत्तिको व्यावहारिक होला ?
हुन्छ । यसका लागि वित्तीय मोडल चाहिन्छ । त्यो भनेको तेस्रो पक्षले तिर्नुपर्छ । बिमा, सरकार वा सेयरमार्फत निजी कम्पनीले तिर्छन् । अलिअलि जनताको योगदान होस् ।
सरकारी सहयोगमा चलाउने भनेपछि त्यो स्वायत्त संस्था हो ?
सबै सहयोग सरकारको होइन । जग्गा सरकारले दियो । उपकरण अनुदानमा माग्छौँ । स्वेच्छिक रकम उठाउँछौँ । सेवाबाट आउने रकम सञ्चालनमा खर्च गर्न पाउँछौँ । गंगालाल, बीपी अस्पताललाई सरकारले स्वायत्त ढंगले चलाएर खा भनेजस्तै हो यो । कानुनचाहिँ गैरनाफामूलक संस्था आकर्षित हुन्छ, वित्तीय मोडलचाहिँ सरकारी स्वायत्त स्वास्थ्य संस्थाको ।
निजी अस्पतालमा पनि काम गर्नुभयो । त्यहाँ यस्तो उपचार सेवा सम्भव देख्नुभएन ?
निजीमा सरकारी स्किम लागू गर्न सकिँदैन । त्यो नहुँदा उपचार महँगो पर्छ । निजी अस्पतालले मलाई यो सेवा दिन प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने प्रस्ताव राखेका थिए । लगानी गरेपछि निजीले प्रतिफल खोज्नु स्वाभाविकै हो ।
स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच किन नभएको ?
पहुँचमा तीनखाले समस्या छन् । भौगोलिक कठिनाइका कारण, व्यवस्थापनमा समस्या भएर र पैसा नभएका कारण सर्वसाधारण पहुँचमा पुग्नै सक्दैनन् । व्यवस्थापकीय क्षमता अभावमा अहिले उपचारमा अप्ठेरो परिरहेको छ ।
उपचार एकदमै महँगो हुँदै गइरहेको छ ?
प्रभावकारी तवरले चल्ने सम्भावना भएकालाई शंकाको सुविधा दिएर प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यसले दक्ष स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुन्छ । निजीले पनि प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । तर त्यहाँ पैसाका कारण सबैको पहुँच पुग्दैन । हामीलाई नाफा चाहिएन । तलबभत्ता राम्रो दिन पाए पुग्यो ।
आफूले चाहेको अस्पतालको काल्पनिक चित्र मनमा कस्तो आउँछ ?
अस्पतालमा बस्दा बच्चाले बाहिरी संसार भित्रै पाओस् । अस्पतालमा बच्चा हुँदा उसको उपचार त हुन्छ नै, साथै परिवारसँगको सम्बन्धन, स्कुलको शिक्षा, संगीत, खेलकुदलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन सकियोस् र उनीहरुलाई बढी मानसिक तनाव नहोस् ।